Fanafihana ravan'ny zandary :: Jiolahy roa maty voatifitra teo am-pibatana volabe • AoRaha
Fanafihana ravan’ny zandary Jiolahy roa maty voatifitra teo am-pibatana volabe
Fahasahiana nivarotana aina. Zandary mpiana-draharaha no nahalavo ireto jiolahy mitam-basy mahery vaika nanafika ny fiaran’ny “Brinks”, nitondra volabe teny amin’ny toby fivarotan-tsolika Jovena, misy
ny toby fiantsonan’ny taksiborosy vaovao eny amin’ny By-pass, Amoronakona, tamin’ny sabotsy antoandro lasa teo.
Efa nivaha ny tao anatin’ilay fiara ary tsy afa-nanao inona ny mpiambina sy ny mpamily no tonga ireo zandary. Teo am-pibatana ny volabe ireo jiolahy no raikitra ny fifampitifirana ka nahafaty ny roa tamin’ iretsy mpanafika, ny mpitandro filaminana.
“Tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany no nitrangan’ny fanafihana. Nijanona teto aminay ny kamiaon’ny “Brinks” hanatitra vola harotsaka ao amin’ny milina fakàna vola amin’ny karatra an’ny banky BNI (GAB na DAB) eto amin’ity tobin-tsolika ity. Izaho mbola miresaka amin’olona no nisy nirodorodo tampoka avy any ambadika dia nanotaniako hoe misy inona. Nilaza ireo olona fa misy manafika ny fiaran’ny Brinks. Amin’io fotoana io anefa misy zandary efa mihodidina miambina ny renivohitra teto aminay. Nampandre azy ireo aho dia nijery avy hatrany ny zava-nisy ireo zandary. Vao nahita ireo zandary ny jiolahy iray dia nitifitra, saingy tsy nahavoa. Namaly tifitra ilay zandary ka voa ny iray tamin’ireo jiolahy dia nianjera. Ny jiolahy faharoa tamin’io efa tao anaty fiara naka ireo vola no voatifitra ihany koa ka lavo. Teo amin’ny tany handeha hitsoaka nivoaka ny fiaran’ny Brinks izy no niala aina”, hoy ny fitantaran’ny mpiambina ny tobin-tsolika Jovena, eny an-toerana, nanatri-maso ity fanafihana toy ireny amin’ny sarimihetsika ireny mihitsy ity.
« Hetsika Papango »
Rehefa nahita ireo namany lavo ireo jiolahy sasany no nitsoaka niparitaka haingana. Naratra ny mpamily ilay kamiao nitondra volabe satria novelesin’ireo mpanafika tamin’ny basy ny lohany. Mbola afaka nitondra ny fiara nitsoaka ihany anefa izy, taorian’ ny zava-niseho. Nifanenjehana hatramin’ ny afak’omaly alina ireo jiolahy nitsoaka saingy tsy hita. Fantatra fa namonjy fodiana any amin’ny
toeram-piasana ilay kamiao taorian’izao tranga izao ary tody soa tsy nisy banga ny vola tao anatiny.
“Ao anatin’ny fanatanterahana ny hetsika Papango ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. Misy ny paikady apetraka ka ny tanjona dia mihidy Antananarivo vantany vao misy tranga fanafihana fa indrindra fakàna an-keriny. Azo lazaina ho voafehy ny tranga fakàna an-keriny eto an-drenivohitra, indrindra taorian’ny fametrahana io paikady iarahan’ny mpitandro filaminana rehetra io”, hoy ny fanazavana azo avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
Kara-panondro iray, basy poleta iray miaraka amin’ny bala maromaro ary môtô “scooter” iray no hita tamin’ireto jiolahy maty voatifitra ireto. Ny zandarimaria dia miantso hatrany ny rehetra mba hanome fampitam-baovao vantany vao mahatsikaritra tranga hafahafa eny anivon’ny fiarahamonina. “Na tranga heverina ho tsy misy dikany aza dia aoka hampandre ka hiantso ny laharana 119 izay maimaim-poana amin’ny finday rehetra mba hahafahana misoroka ny loza. Miezaka mandray andraikitra izahay miaro ny olona sy ny fananany na iza na iza. Mangataka tolo-tanana avy amin’ny mponina ihany koa
anefa fa tsy vitanay irery ny fitandroana ny fandriampahalemana”, hoy izy ireo.
Fanafihana mpivarotra omby :: Rotiky ny bala ny fiarana zandary iray avy noentin’ny jiolahy